Maro Lavitra Noho ny Lalao Baolina Kitra Ny Nalaza Tao Brezily Tamin’ny Taona 2014 · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Gail
Voadika ny 30 Janoary 2015 17:13 GMT
Ny rafitr'i Canteneira, izay mamatsy rano azo sotroina ho an'olona 7 tapitrisa ao Sao Paulo, nidina tany amin'ny haavo ambany indrindra hatramin'ny nisiany tamin'ny 2014 : 4,1 isanjaton'ny fiatiana zakany tamin'ny Oktobra. Saripika tao amin'ny Flickr an'i Fernando Stankuns. CC BY-NC-SA 2.0
Tsy natao ho an'ny mpankafy i Brezily” Izany no ohabolana malaza eny tambajotra sosialy breziliana hanazavana ny korontana nafafin'ny fifandirana ara-potokevitra sy ara-politika, ka mahasahirana ireo manam-pahaizana hanome ny dikany (ka hakany fironana)
Raha mitodika any amin'ilay ilay firenena amerikana latina lehibe indrindra ny mason'izao tontolo izao tamin'ny taona 2014, dia iray amin'ny zoro nitodihana ankilan'ny taom-pifidianana, ny fihetsiketsehana sy ny “textões de Facebook” [lahatsoratra amin'ny Facebook] — fomba iray itenenana ny ‘andran-dahatsoratra lehibe amin'ny Facebook’ — ataon'ireo leon'ny embona sy ady maharitra andro maromaro hampisehoana endrika faly amin'ny sary sy lahatsarin-tsaka amin'ny tambajotra sosialy, fotsiny ihany ny baolina kitra.
Ny oroka pelaka tahaka ny endrika dingana famaranana amin'ny baolina kitra
Fifanorohana teo amin'i Felix sy Niko tamin'ny fizarana farany tao amin'ny télénovela “Amor à Vida”
Mpjiery fahitalavitra an-tapitrisany no nanatri-maso ny oroky ny pelaka voalohany amin'ny fahitalavitra raha nijery ny tantara mitohy breziliana iray. Ity fanorohana ity no vokatry ny fanentanana goavana natao tamin'ny tambajotra sosialy mitaky ny mpanoratra tantara hisian'ny fifanorohana amin'ny molotra eo amin'ireo lehilahy mpifankatia Felix sy Niko amin'ny fizarana farany amin'ny tantara mitohy “Amor a Vida” .
Betsaka dia betsaka ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra ao Brezily, saingy tsy malaza amin'ny fihaikana petra-kevitra sy ny fanitsahana ny fady, antony iray mampisy ny hovitrovitra tanteraka ao amin'ny firenena. Amin'ireo fifanoheran-kevitra malaza rehetra ao amin'ny firenena, dia ny zon'ny LBGT no lehibe indrindra : Ao Brezily no ahitana ny diaben'ny fireharehana mahapelaka lehibe indrindra sy mitana ny laharana voalohany amin'ny famonoana LGBT.
Fitsaram-bahoaka sy fanavakavahambolokoditra
Tovolahy mifatotra amin'ny andrin-jiro izay pejin-gazety iray ihany no nanakona ny henatra.
Narahina fahatafintohinana nanerana ny firenena ny fidarodarohana ‘adolatsento 15 taona mainty fihodirana, niboridana sy nifatotra tamin'ny andrin-jiro iray tao amin'ny faritry ny mpanankarena ao Rio de Janeiro. Nilaza ity tovolahy ity fa nodarohan'andian-dehilahy miisa 30 – heverina ho andrimasom-pokonolona ao amin'ilay faritra ary nolazaina fa natao izany hampitsaharana ny halatra. Raha nanameloka fidarodarohana, tsy ijerena hoe nangalatra sa tsia ilay zalahy io, ireo hetsika ara-tsosialy isan-karazany, dia nisy mpanentana fandaharana iray malaza kosa mbola niaro ireo mpidaroka tao amin'ny fahitalavi-pirenena.
Tranga maro toy izany no nameno ny vaovao nandritra ny herinandro manaraka, ka nampitopatopa ny adi-hevitra raha mety ny hanaovana fitsaram-bahoaka. Fa tena nampivarahontsana tanteraka ny firenena ny famonoana ankitsirano vehivavy iray tany ambanitanànan'i Guarujà. Tsaho niely tao amin'ny Facebook milaza fa mangala-jaza hanatanterahana fombafombam-pamosaviana, izay voaporofo fa diso, no nahatonga ny famonoana.
Namoaka ity fanontaniana ity hoan'i Brezily ny gazety espaniola “El Pais” manao hoe: “Inona re no mitranga raha toa ka voaporofo ny fisian'ny heloka?” Mbola hanohina antsika ihany ve ny fomba mampihoron-koditra namonoana azy, izay tsy nisy fomba mihitsy hiarovany tena?
Fifanandrinan'ny Mpanohitra sy ny Mpankasitraka ny Mondialy
Mpitolona iray mihazona sora-baventy izay misoratra hoe “Tsy hisy Mondialy eto” nandritra ny onjam-panoherana tamin'ny volana May Saripika tao amin'ny Flickr an'i Ninja Midia. CC BY-2.0
Hita teny an-dalamben'ny Brezily isan'andro ny fihetsiketsehana manohitra ny fandraisana ny Mondialy. Amin'ny teny faneva toy ny hoe “Fifa Go Home” |Fifa modia] (fakantahaka maneso ny hoe “Yankee go home”), manameloka ny tsy fitoviana miharihary sy ny tsy fisian'ny zo fototra maha-olona ho an'ny ankamaroan'ny mponina breziliana ireo hetsika sosialy ireo, manoloana ny lanonana izay handaniana volam-panjakana be indrindra izay hitontona any amin'ny mpandoa hetra - ary ny tapakila idirana amin'izany dia mbola lafo noho ny mari-karama breziliana ambany indrindra.
Nahatonga ny parlemantera hanolotra ny “Lalàna iadiana amin'ny fampihorohoroana”, mba hampihenjanana kokoa ny lalana momba ny fihetsiketseha-panoherana ny fahafatesan'ilay mpakasary Santiago Idilio Andrade, izay voan'ny afomanga napoakan'ny mpikatroka nandritra ny fakam-baovao nataony tamin'ny fihetsiketsehana iray tao Rio. Vinavinan-dalàna izay tena notsikerain'ireo mpanao fihetsiketsehana fatratra.
Herinandro vitsivitsy talohan'ny Mondialy, dia nisongadina tao amin'ny tambajotra sosialy koa ny diezy izay hafa: #VaiTerCopaSim, na #YesThereWillBeACup [Eny hisy ny Mondialy] izay hita fa niainga tao amin'ny pejy Facebook. Nampiasaina manokana ity diezy ity hanebahana ireo mpanao fihetsiketsehana, ary mandray ny olan'i Brezily ho ao anatin'ny mampiavaka azy – milaza ny sasany fa karazana hetsika politika entina hitazonana ny fahatsaram-panahin'ny mponina io sy tsy itodihana any amin'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Resy tamin'ny isa tsy adinoina sy nahamenatra 7 noho 1 nanoloana an'i Alemaina i Brezily tamin'ny ampahaefa-dalana, ka ampy izany hanaovana sary mampitsiky amin'ny aterineto hoan'ny taranaka 10 mifandimby (sy lohatenin-gazety maro mahakivy eo amin'ny fonony). Mandritra izany fotoana izany, Olona 28 no voasambotra tao Rio andro iray talohan'ny famaranana – tsy noho ny fanaovana fihetsiketsehana, fa noho ny mety hanomanana fihetsiketsehana.
Saripika namboarina natao hitsikiana ho an'ireo taranaka folo mifandimby noho ilay 7-1 tsy hay hadinoina raha nifanandrina tamin'i Alemaina. Tsy fantatra ny tompony
Taorian'ny Mondialy dia voafafan'ny dingam-pifanandrinana hafa teo amin'ny tambajotra sosialy indray i Brezily dia ny fifidianana filoham-pirenena izay natao ny 6 oktobra izany. Tsy nampoizina ny firehidrehitry ny hazakazaka hofidiana ho filoha tamin'ny fisongadinan'i Marina Silva, mpisolo toerana an'i kandikà Eduardo Campos hisolotena ny Antoko Sosialista Breziliana taorian'ny fahafatesana nihatra tampoka tamin'ilay kandidà nosoloiny tamin'ny lozam-piaramanidina tamlin'ny volana aogositra.
Ny fifandrafiana naharitra an-taonany maro eo amin'ireto antoko politika roa lehibe indrindra tao Brezily (Ny Antokon'ny Mpiasa avy eo amin'ny Afovoany-Havia, teo amin'ny fitondrana hatramin'ny 2002, sy ny Antoko Sosialy-Demokraty Breziliana avy eo amin'ny Afovoany-Havanana, mpitarika ny antoko breziliana ao amin'ny fanoherana) dia voakorontan'i Marina Silva, nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fitsapa-kevitra natao tamin'ny tapaky ny volana Septambra.
Andaniny, ny tahotra kaomonisma. Ankilany, ny tahotra fasisma. Hanaja ny fitandroana ny filamininana ihany ve ny roa tonta indray andro any? Saripika Flickr an'i Ninja Midia sy Aecio Neves. CC BY 2.0
Nisy kristiana evanjelika sady mpandala ny tontolo iainana malaza antsoina hoe Silva izay nanolotra ny tenany ho “tetezana” teo amin'ny mpandala ny nenin-drazana sy ireo liam-pivoarana. Saingy tsy nahomby izany fikasany hampisy dinika izany noho ny fanapahan-kevitra tsy voalanjalanja maro nandritra ny fampielezan-kevitra nataony- ny lehibe indrindra amin'izy rehetra dia tamin'ny tsy nanohanany intsony ny fanambadian'ny olona mitovy fitaovam-pananahana, ka nanovany ny programan'asany taorian'ny fanerena avy amin'ny mpitondra fivavahana.
Nihitsana ihany izy tamin'ny fihodinana faharoa, izay nahitana ny valim-pifidianana nifanakaiky indrindra hatramin'ny tetezamita mankany amin'ny demokrasia tamin'ny taompolo 1980. Voafidy indray tamin'ny elanelana tery dia tery 51 isanjaton'ny vato ny filoha mbola mitondra Dilma Rouseff.
Mandresy lahatra ny sasany fa ahafahana mampiseho ny fihenan'ny herin'ny Antokon'ny Mpiasa izany ary misy vondron'olona betsaka vonona ho amin'ny fiovàna. Ny hafa kosa manondro ny anjara toeran'ny media, izay saiky ao amin'ny fanoherana ny ankamaroany, amin'ireo vokatra ireo. Etsy ankilany kosa ny ao amin'ny elatra havia, dia mbola mahatsiaro tsy ho ampy fisoloan-tena na ao amin'ny governemanta na ao amin'ny mpandala ny nentin-drazana mpanohitra, miandray (fatratra angamba) izay “tena kandidà elatra havia” mba hitondra ny adi-hevitra.
Raha miala tsikelikely amin'ny somaritaky ny fifidianana ny firenena, dia tratran'ny tsy fisian-drano kosa ny tanana lehibe indrindra ao Amerika Latina. An-taonany maro izay no nanamavanan'ireo manampahefana izany olana izany, fa ny tsy fahampian'ny orana amin'izao fotoana izao any Atsimo-Atsinanan'i Brezila ihany no antson'ny krizy. Rehefa nifarana ny taona, dia latsaky ny 100 andro ihany no azo antoka hamatsiana rano an'i Sao Paulo ho an'ireo mponina miisa 8 500 000 ao aminy.